Chirpify: Wedzera Shanduko kune Yako Yemagariro Media Kuongorora | Martech Zone
Chirpify inogonesa vashambadzi kumisikidza zvinokonzeresa izvo zvinobvumidza vatengi kutora chikamu neiyo brand kubva kune chero chiteshi mune yemagariro media Unogona kumutsa zvinokonzeresa pamafambiro ekuti vashandisi venhau vezvemagariro vatenge, pinda mukusimudzira, uwane mukana kune zvemukati zvemukati, nezvimwe.
Svondo ino, tarisa shambadziro yedu nyowani yeTV, tarisa kune iyo hashtag uye ubate yako wega mapaki evanonaka veduwe. #awardsnight pic.twitter.com/ASU58SL1KX
Kana mushandisi akashandisa iyo hashtag kuti apinde mune yekushambadzira meseji, Chirpify anopindura achidzoka ipapo pachinzvimbo chechiratidzo. Ivo vanounganidza dhata (chero chinhu icho hachizi chinoda kuziva, zera, email, inodiwa ruvara) mu-kuyerera nefoni inoshamwaridzika fomu uye vanobatanidza iyo yemagariro inobata + data info zvakananga mumakambani CRM system.
Iyo yakanaka nzira yekuvaka yakazara yevatengi chimiro uye dzidza izvo vateveri vanofarira mune zvinokurudzirwa pane chiteshi chega chega. Iyo yakananga mhinduro chikuva inoshanda paFacebook, Twitter uye Instagram. Heano mumwe muenzaniso wakanaka:
Spalding Varaidzo, iri kushandisa Chirpify ye kushambadzira-munzvimbo. PaRascal Flatts & Jason Aldean Zhizha Concerts, konzati-vanoenda vanoona Chirpify Actiontags kumusoro paJumbotron, nekufona kuti uite: Pinda kune Chigaro Kuvandudza! Tweet #Pinda #KupisaDownTour.
Chirongwa cheChirpify chinoteerera iwo ma # tagtag, uye inopindura kune munhu wega wega (pachinzvimbo chemufananidzo) neshoko uye chinongedzo chekupinda mumakwikwi. Icho chinongedzo chinovhura yedu mbozhanhare fomu yekutendeuka kwatinounganidza yavo email kero (pamwe neayo Twitter mubato). Uyo anokunda anosarudzwa uye anoziviswa pamberi pechiito chikuru chisati chatanga - uye ivo (uye neshamwari) vanokokwa pasi kunzvimbo yekugara yeVIP.
Chirpify yakabatanidza zvakare analytics kupa vatengi mhedzisiro:
Isu tinoshanda nevatengi pane zvese mushandirapamwe uye nekuenderera mberi. Kazhinji, mabhureki kana avo vamiririri vanouya kwatiri nechirongwa chekushambadzira chavanoda kushandisa Chirpify kumisikidza - uye isu tinoshanda navo kumisikidza chikuva chezvavanoda chaizvo.
Tags: zviitochipifyyakananga kupindura magariro enhaukushambadzapasocial media commercesocial media kutendeukasocial media shandukosocial media triggerTriggerkushambadza kwenzvimbo
Mazhinji eSarudzo Yekutenga muB2B Inoitika Usati Wabata neKambani Yako
Iko Kushambadzira Kwako kuri Kutambura Kubva kuFragmentation, Kuodzwa Mwoyo uye Kushaikwa kweSangano?